'अनुहारको चाउरीपना हटाउने बोटक्स’ - Health TV Online
/ आइतवार, २६ बैशाख, २०७८
२६ माघ २०७७, सोमबार
‘अनुहारको चाउरीपना हटाउने बोटक्स’
हेल्थ टिभी अनलाइन 63 Views
डा धर्मेन्द्र कर्ण, छालारोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ
बोटक्स’ चाउरीपना हटाउने असाध्यै प्रभावकारी कस्मेटिक उपचार पद्धति हो। यो सुईको माध्यमबाट दिइन्छ। विश्वभरी नै यो प्रविधि महिलाहरुका वीच निकै पपुलर छ । महिलाहरु आफनो सौन्दर्यप्रति बढी संवेदनशिल हुने भएकाले पनि होला बोटक्स गरेर चाउरीपना हटाउनेमा महिला नै बढी हुने गरेका छन्। नेपालमा पनि केही वर्षयता बोटक्स लगाउनेको संख्या बढ्दो छ । उमेर बढ्दै जाँदा अनुहारमा रेखाहरु देखा पर्न थाल्छन्। त्यसमा पनि महिलाहरुको छाला बढी नरम हुने भएकाले पनि यो समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छ । यसले लगाएको तीन दिनदेखि सात दिनभित्र नै काम गर्न शुरु गर्ने र विस्तारै चाउरीपना हराउँदै जाने भएकाले पनि धेरैको रोजाईमा यो पर्ने गरेको छ । तुरुन्त रिजल्ट चाहिनेलाई भने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बोटक्स नै हो।
बोटक्स एक किसिमको केमिकल हो। यसले रेखाहरु खुम्चाउने वा चलाउने मांसपेशीलाई आराम दिने काम गर्छ । त्यसैले बोटक्स लगाएको भागमा छाला खुम्चिन पाउँदैन। जसले गर्दा लाइन वा रिंकल बस्न पाउँदैन्। कुन भागमा बोटक्स लगाउने हो त्यसको सही पोइन्ट पत्ता लगाएर इन्जेक्सन दिइन्छ। लगाएको ४ देखि ६ महिनासम्म यसको असर रहिरहन्छ।
बोटक्स कस्मेटिक रूपमा राम्रो हुने मात्र होइन उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो डेढो आँखा सिधा गर्न ‘सर्भाइकल डिस्टोनियामा, क्रोनिक माइग्रेन’मा नशा रोग विशेषहरूले पनि यसको प्रयोग गर्छन्। बोटक्स लगाउँदा जुन भागमा चाउरीपना छ त्यस भागलाई हेरे त्यही त्यही भागमा लगाइन्छ । र यसरी मसिनो सुई मार्फत दिइने हुँदा खासै दुखाई पनि महशुुस हुँदैन्।
कुन उमेर समूहले लगाउने बोटक्स ?
त्यसो त बोटक्स जुनसुकै उमेरमा पनि लगाउन सकिन्छ । तर विशेष गरी उमेरसँगै आउने चाउरीपना हटाउनका लागि यसको प्रयोग हुने हुँदा ३० वर्ष पछि नै लगाउने चलन बढी छ। तर १८ वर्ष पुगेकाले यो बोटक्स लगाउन मिल्छ । अहिले नेपालमा विदेशमा बस्ने र नेपाल आउँदा यो उपचार गरेर जाने धेरै छन्। बोटक्स बाहिर निकै महंगो पर्ने भएकाले पनि उनीहरुले यहाँ गरेर जान खोज्छन्। बोटक्सको असर ६ महिनापछि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यसैले यो ६ महिनामा पुन लगाउँदा राम्रो हुन्छ। खासगरी धेरै अनुहारमा बोटक्स गरिन्छ। निधारमा देखिने मसिना फाइन लाइनदेखि चिउँडो, आँखा वरिपरी बोटक्स गरिन्छ। नाकको वरिपरी, घाँटीमा पनि बोटक्स गरिन्छ। कति चाउरीपना छ, कुन कुन अंगको चाउरीपना हटाउने हो, त्यसअनुसार यसको उपचार खर्च निर्धारण गर्छ।
खासमा बोटक्स पूर्ण रुपमा सुरक्षित उपचार विधि हो । तर हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिं दक्ष चिकित्सकसँग मात्र परामर्श लिएर यसको सेवा लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं यसको प्रयोग गलत ठाउँमा पर्यो भने यसले झन नराम्रो बनाउनसक्छ । त्यसैले बोटक्स गरिरहेका र दक्ष चिकित्सकसँग यो सेवा लिंदा भने कुनै हानी गर्दैन्। अहिले बजारमा यसको धेरै नै विज्ञापन भइरहेको देखिन्छ । विज्ञापनको भरमा भने बोटक्स लगाउन जानु हुँदैन। बोटक्स लगाउँदा बुझेर मात्र लगाउनुपर्छ ।
हेल्थ टिभी अनलाइन
हेल्थ टिभी अनलाइन स्वास्थ्य विधामा नेपाली पत्रकारिता इतिहासकै पहिलो श्रव्यदृश्य केन्द्रित मल्टी मिडिया अनलाइन पोर्टल हो। जनस्वास्थ्य समस्या, रोग र उपचार, चिकित्सा विज्ञान र शिक्षा, आयुर्वेद, स्वास्थ्य प्रविधि, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनशैलीलगायतका सवालमा समाचार, टिप्पणी, विचार, विज्ञको राय, अन्तरवार्ता, छलफल र संवादमार्फत विश्वव्यापी रूपमै पाठक, श्रोता र दर्शकलाई सचेत गराउने कार्यमा हेल्थ टिभी अनलाइन कटिबद्ध छ।
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
‘मलाई त आफूले कुनै बेला मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि गरेको थिएँ र भन्ने लाग्छ’
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार
‘जोर्नी प्रत्यारोपणपछि बिरामीलाई दुखाइ कम त हुन्छ नै दैनिक जीवनमा निकै सहज हुन्छ’
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार
साइक्लिङ गर्नुका यस्ता छन् फाइदा
४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार
शिरोधारा : तनावबाट छुटकारा पाउने अति उत्तम माध्यम
३० माघ २०७७, शुक्रबार
बहुगुणी अमिलो फल कागती, यस्ता छन् फाइदा
जाडोमा आगो ताप्नुहुन्छ ? अपनाउनुस् यस्तो सावधानी
२८ पुष २०७७, मंगलवार
चुरोट छोड्न खोजिरहनु भएको छ ? यसरी छोड्न सकिन्छ
२४ पुष २०७७, शुक्रबार
बिरामीको घरमै गएर अस्पतालको जस्तो सम्पूर्ण सेवा दिने ‘मेरो हस्पिटल’
काठमाडौं महानगरद्धारा त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई भेन्टिलेटर सहयोग
शनिबार ८ हजार ४१८ कोरोना संक्रमित थपिए, ५३ जनाको मृत्यु
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्न नदिन के गर्ने ?
काठमाडौं उपत्यकामै छन् ३४ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित
शुक्रबार थपिए ९ हजार १९६ कोरोना संक्रमित, ५० जनाको मृत्यु
मधुमेह रोग भएकाले के खाने के नखाने ?
भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरलाई कोरोना संक्रमण, अस्पताल भर्ना
महिलाले ढिला बच्चा जन्माउँदा आउन सक्छन् यस्ता जटिलता (भिडियोसहित)
होली खेल्दा सुरक्षित रङको प्रयोग गरौँ
पाठेघरभन्दा बाहिर गर्भ बस्ने जोखिम कसलाई ?
आउटरिच मिडिया प्रा.लि.
बुद्धनगर- १०, बानेश्वर, काठमाडौं
टेलिफोनः +९७७-०१-४७९३४८०, ९८४१९७५८६७
ईमेलः [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : ८९१/ ०७५-७६
विज्ञापन / बजार निर्देशक
Copyright © 2018 - 2021 Health TV Online. Developed by Webtech Nepal